ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘုန်းကြီးအတုများကို လိုက်ဖမ်း | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘုန်းကြီးအတုများကို လိုက်ဖမ်း
ထိုင်းနိုင်ငံတွင် ဘုန်းကြီးအတုများကို လိုက်ဖမ်း
Posted by bigbird on Jan 21, 2011 in News | 15 comments
ထိုင်းနိုင်ငံ ပင်လယ်ကမ်းခြေမြို့တစ်ခုဖြစ်သော ချွန်ပူလီမြို့ တွင် ဘုန်းကြီးယောင်ဆောင်၍
အလှူလိုက်ခံနေသူများအား ရဲတပ်ဖွဲ့ မှ လိုက်လံဖမ်းစီးခဲ့ရာ စိတ်ကြွဆေး၊ကျည်ဆံနှင့်သေနက်
တို့ ပါ တွေ့ ရှိခဲ့ကြောင်း ယနေ့ ထုတ် Thairath သတင်းတွင် ဖော်ပြပါရှိပါသည်။
ဒီနေ့ သတင်းထဲမှာ မနက် ဆွမ်းခံ ကြွတဲ့ ရဟန်တွေ ဖမ်းဆီးပြီး ရိုက်နက်ခံနေရတယ်လို့ ပြောတယ်။ တိုင်သူရှိလို့ ဖမ်းတာတဲ့.. မနေ့က စိတ်ကြွဆေးနဲ့ ဘုန်းကြီး ဖမ်းမိတာကနေ စတယ် ထင်တာဘဲ။ တကယ် အစစ်အမှန် ဘုန်းကြီးတွေလဲ ဖမ်းခံ နေရတယ် ပြောတယ် ရဟန်း ၈ပါးလောက် ပါသွားတယ် ပြောတာဘဲ။ ကြားရတာ စိတ်မကောင်းဘူး အတုထဲမှာ အစစ်တွေ ခံရမှာတော့ စိုးရိမ်မိတယ်ကွယ်။ ရဟန်းတွေ နိပ်ကွပ်ခံရတာ ထိုင်းမှာ ပါဖြစ်နေပါကောလား။
သာသနာ မသူတော် ဘေးက ကင်းဝေးပါစေ။
၂၀ .၀၁ . ၂၀၁၁ နေ့ မနက် ၅း၀၀ ခန့် ထိုင်း နိုင်ငံ မဲ့ဆောက်မြို့တွင် ဆွမ်းခံထွက်နေသော ဘုန်းတော်ကြီးများအား ထိုင်း တောမောင်း (ခ) လ.၀.က မှ ထိုင်းစကားဖြင့်
မေးမြန်းရာ ထိုင်းစကားမတတ်သောရဟန်း ၊ ကိုရင် များအားဖမ်းဆီးခေါ်ဆောင်သွားခဲ့ပါသည် ၊
ထိုသံယာများထဲတွင် မဲ့ဆောက်မြို့ ဝပ်အလမ်းကျောင်း မှ ဦးသူရိယ ၊သက်တော် (၅၇)နှစ်လည်းပါဝင်ခဲ့ပြီး၊တောရကျောင်းမှအာဂန္တု ရဟန်း(၂)ပါးလည်းဖမ်းဆီးခံရပြီး ကျောင်းမှဆရာတော် မှလိုက်လံခေါ်ဆောင်ရာထိုင်း အာဏာပိုင်များက ခေါ်ယူခွင့်မပေးခဲ့ပါ ။ သို့ကြောင့် မြန်မာနိုင်ငံသို့ပြန်မရသောကြောင့် ထိုင်းနိုင်ငံတွင်ခိုလှုံနေထိုင်သီတင်သုံးရသော မြန်မာရဟန်းတော်များမှာ ဆွမ်းခံမထွက်ရဲကျောင်းဝင်းအပြင်သို့မထွက်ရဲဖြစ်ကာ စိတ်ဆင်းရဲ ပင်ပန်းနေကြရပါသည်။
တကယ်ကို ပင်ပန်း ဆင်းရဲ နေကြတာ စိတ်မကောင်းဘူး အဲဒီ သတင်းကို တစွန်း တစ ကြားထားတာ.. မြန်မာ ဘုန်းကြီးတွေ အဲဒီမှာ သင်္ကန်း ဘာအရောင် များ ရုံမလဲ မသိဘူး။ အ၀ါဘဲ ရုံမလားမသိဘူးနော်။
အစစ်တွေကြားထဲမှာ အတုတွေရောနေတဲ့ အခုလိုခောတ်ကြီးမှာ အတုနဲ့ 
အစစ် ခွဲကြားသိနိုင်အောင်ကြိုးစားပြီး ကိုးကွယ်ဆည်းကပ်ဖို့ က ကျွန်တော်တို့ 
ရဲ့တာဝန်ပဲမဟုတ်လား အန်တီဆူးရယ်။
လူအများယုံကြည်ကိုးကွယ်တန်ဘိုးထားတဲ့ ရဟန်းအသွင်ကိုယူပီး မကောင်းမှုတွေလုပ်နေကြတာ … ကွီးတော့ သူတို.အစား ကြက်သီးတောင်ထတရ်။
မြန်မာပြည်မှာလဲ လုပ်သင့်တယ် သာသနာ သန့်ရှင်းရေးအတွက် ဒါပေမယ့် အတုတွေအတွက် အစစ်တွေ ကြားကမခံရရင်တော့ ကောင်းမယ်
စီစီစစ်စစ်လေးဆိုရင်တော့ ကောင်းမှာပဲ တကယ်ကောင်းတဲ့ရဟန်းတွေဘေးကင်းပါစေ……………………….
အတုနဲ့ အစစ်က ခွဲရတာလွယ်ပါတယ်။ 1နာရီတောင်မစုံစမ်းရဘူး။ ဗေဒင်ဟောလား ?ယတြာပေးလား?။ ဂဏန်းပေးလား?။ သာသနာဘက်လိုက်သလား ? ဒါယကာဘက်လိုက်သလား? ဟင်းးဟင်းး ဈေးထဲမှာ စာအုပ်ကြားထဲပိုက်ဆံညှပ်ပြီး လိုက်အလှူခံနေတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ များများလာပြီနော် ခုတစ်လော … မအပ်စပ်တဲ့ ပစ္စည်း မလှူပါဘူး လို့ပြောတာကို သိပ်မကျေနပ်ချင်ဘူး ။
သူငယ်ချင်း တယောက် ပြောတဲ့ စကားနား ထဲ ပြန်ကြားမိတယ်..
ဘုန်းကြီး တကယ် အကျင့် ရှိမရှိ သိချင်ရင် ဒေါသဖြစ်အောင် လုပ်ကြည့်တဲ့။
ဘုန်းကြီး ဆိုတာ လူတွေ ထက် ပိုပြီး ဒေါသဖြစ်လွယ်တယ်တဲ့။
၀ိနည်းနဲ့ ထိန်းချုပ်ရတာများတော့ စိတ်ထိန်းချုပ်မှု ညံတယ်တဲ့။
ဘုန်းကြီး အတုတွေကို ဖမ်းဆီးတာ အရမ်းကောင်းပါတယ်…. မြန်မာနိုင်ငံမှာလည်း အဲဒီလို ဖမ်းဆီးသင့်ပါတယ် ….. မြန်မာနိုင်ငံမှာ လည်း ၀ိနည်းမညီတဲ့ ဘုန်းကြီးတွေ အများကြီးပဲ တွေ့နေကြတယ်…. စီစီစစ်စစ်လေးတော့ မေးမြန်းစုံစမ်းပြီးတော့ ဖမ်းသင့်ပါတယ် ….. မကောင်းတဲ့ သူတို့တတွေကြောင့် ကောင်းတဲ့သူတွေ ဒုက္ခရောက်ပါတယ် အထင်သေးခံရပါတယ် …. မြန်မာလူမျိုးတွေ အတွက်တော့ အကြည်ညိုပျက်စရာတွေများနေပါပြီ …. အမြန်ဆုံး ဖမ်းဆီးသင့်တယ် …
မြန်မာအများစုက အဲဒိအတုအယောင် ကိုပဲ ကိုးကွယ်နေကြတာဗျ ဂဏန်း ပေးတဲ့ဘုန်းဘုန်း ဗေဒင်မှန်တဲ့ဘုန်းဘုန်း ဓါတ်လုံး ပေးတဲ့ဘုန်းဘုန်း လက်ဖွဲ့စွမ်းတဲ့ဘုန်းဘုန်း အဲဒိတော့ အဲဘုန်းဘုန်းတွေ ဖမ်းလိုက်ရင် ပြည်သူပြည်သားတွေ ကိုးကွယ်ရာမရှိမှာ စိုးလို့ သူတို့ ပေါ်လစီနဲ့ ကိုက်ညီအောင် မဟောပြောသော ကိုယ်တော်မြတ်များ အား စတင် ……………………
ဒီလို ဘုန်းကြီးအတုတွေဟာ ကျွန်တော်တို့ဆီမှာလည်း အတော်များများရှိနေမယ်ထင်တယ်
ပိုက်ဆံတောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတုတွေ…. အရက်သေစာ မှီဝဲတဲ့ဘုန်းကြီးတုတွေ…. မာတုဂါမ တွေနဲ့ ဒွေးရောယှက်တင်နေတာတွေ အများကြီးပါပဲ….
သေသေချာချာ စိစစ်အရေးယူနိုင်ရင် အကောင်းဆုံးလို့ ထင်ပါတယ်
အတု တိုက်ဖျက်ဖို့ လုပ်မယ် ဆိုရင် အတု အကြောင်းပြပြီး အမြင်ကတ်တာတွေ ပါကုန်မယ်။ အတု ကို အတု သမာ သမတ် ကျကျ ဆုံးဖြတ်မဲ့ သူ လိုအပ်ပါတယ်။